Ronda Rousey dia miditra amin'ny lalao mivantana miaraka amin'ny WWE Superstars - Wwe
Ronda Rousey dia miditra amin'ny lalao mivantana miaraka amin'ny WWE Superstars
Ny Tompondakan'ny Vehivavy WWE RAW teo aloha Ronda Rousey dia nanatevin-daharana an'i Twitch streamers FaZe Adapt, NickEh30, ary ireo kintana WWE maromaro tamin'ny onjam-peo vaovao misy ny lalao mitondra ny lohateny hoe 'Superstar Gaming Series'.
Ny kintana dia nifamely tamin'ny lalao video Among Us malaza sy WWE 2K Battlegrounds. Ronda Rousey dia tsy tao amin'ny fahitalavitra nandritra ny roa taona latsaka, ka mpankafy maro no nahita azy indray rehefa ela.
Nalefa voalohany tamin'ny sehatra sosialy WWE ny stream mivantana, anisan'izany ny YouTube sy Twitter. Anisan'ireo mpandray anjara ny The Miz, Adam Cole, Jessamyn Duke, Marina Shafir, ary Xavier Woods.
Iza ilay Impostor ?! 🧐 @AmongUsGame #WWEGaming @RondaRousey @FaZeAdapt @ NickEh30 @AdamColePro @MmmGorgeous @jessamynduke @QoSBaszler @GameOverGreggy pic.twitter.com/C4rVRYeTzv
- WWE (@WWE) 30 Desambra 2020
Nandritra ny nilalaovan'izy ireo teo anivonay, dia noroahina hiala ny lalao ireo nampalahelo rehefa nanandrana nitady ilay mpisandoka izy ireo, izay nambara fa FaZe Adapt.
Liv Morgan dia nandresy ny kintana hip-hop Wale tamin'ny WWE 2K Battlegrounds, ary tamin'ny hetsika lehibe dia nifamaly i Ronda Rousey, The Miz, FaZe Adapt, ary NickEh30 nandritra ny lalao Fatal Four-Way Match tamin'io lalao io ihany, izay nandresen'i Andriamatoa ankehitriny. Vola ao amin'ny Banky, The Miz.
MPANJAKAN'NY MASY TANY!
Tsy mila bokotra A ianao rehefa an #Misoratra ! @mikethemiz #WWEGaming @ 2KBattlegrounds @RondaRousey @ NickEh30 @FaZeAdapt pic.twitter.com/55sKUZWWll
Na dia tsy nandresy aza izy dia tena nahagaga an'i Rousey. Mpankafy maro no mety tsy hahalala fa ny Baddest Woman On The Planet dia manana traikefa amin'ny lalao. Ronda nilalao lalao isan-karazany an-tserasera amin'ny anaran'ny fiantrana mandritra ny fijanonany avy any WWE, ary nampindramin'ny Sonya Blade ny feony tao amin'ny Mortal Kombat 11 aza izy.
Ronda Rousey any WWE
Rousey dia Tompondakan'ny Vehivavy Raw taloha.
Noho ny lazany malaza dia efa kintana efa niorina i Ronda Rousey rehefa tonga tany WWE. Ny lalao voalohany nataony tao amin'ny WrestleMania 34 dia mihoatra ny nandrasana, ary mpankafy sy mpitsikera maro no nidera azy noho ny zava-bitany.
Nahazo ny anaram-boninahitra voalohany nataony tamin'ny WWE izy tamin'ny nandreseny an'i Alexa Bliss tao amin'ny SummerSlam hahazoana ny Tompondakan'ny Vehivavy RAW, anaram-boninahitra notananany hatramin'ny WrestleMania 35.
Tao amin'ny Showcase of the Immortals dia namoy ny anaram-boninahiny ho an'i Becky Lynch i Rousey tamin'ny hetsika lehibe tao amin'ilay fandaharana, ary tsy mbola niseho tamin'ny fahitalavitra intsony izy nanomboka teo.
Nampientam-po tokoa ny adiny tamin'ny The Man, ary mandraka androany, mpankafy maro no maniry ny hahita azy roa hifandona amin'ny lalao tokana ao amin'ny Show of Shows.
mifandray amin'ny vatolampy sy ny romanina
inona no dikan'ny fiarahana amin'ny lehilahy
famantarana ara-batana mahasarika olona
mandra-pahoviana no mety hitiavanao olona iray?
ny fomba hibaikoana fifanajana amin'ny fifandraisana